कृषि विकास बैंकको चमत्कारः १० देखि ६० प्रतिशत सम्म व्याज छुट? - Aathikbazarnews.com Aathikbazarnews.com कृषि विकास बैंकको चमत्कारः १० देखि ६० प्रतिशत सम्म व्याज छुट? - Aathikbazarnews.com
कृषि विकास बैंकले कोरोना महामारीबीच आफ्ना ग्राहकहरुलाई राहत दिने उद्देश्यले १० प्रतिशत देखि ६० प्रतिशत सम्मको ब्याज छुटको चमत्कारी स्कीम ल्याएको खुलेको छ ।
बैंकले साना तथा लघु ऋणीहरुलाई विशेष प्याकेज ल्याएको देखिन्छ । कोरोना भाईरसको महामारीमा ऋणीहरुले गर्दै आएको उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय बन्द गरेर बसेका ऋणीका लागि कृषि विकास बैंकले राहत स्वरुप निर्देशिका नै जारी गरेर विशेष स्कीम ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।
सो राहत स्कीक मार्फत बैंकले पूराना २ वर्ष भन्दा माथीका ऋणीहरुलाई राहत स्वरुप ब्याज छुट दिन लागिएको बैंकका सीइओ अनिल कुमार उपाध्यायले पंक्तिकारसंग बताए । उनीले भनेः– धितो नभएका ऋणी र व्यवसाय नै बन्द भएकाहरुलाई केही राहत दिने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र रहि यो काम शुरु गरेको चाहि छौं । यो अधिकार केन्द्र देखि शाखसम्मलाई दिएको समेत उनीले बताए ।
बैंकले निर्देशिका नै जारी गर्दै यस्ता ऋणीहरुलाई १० प्रतिशत देखि ६० प्रतिशत ब्याज छुट दिइने भएको हो ।
‘विगत २ वर्षदेखि भाका नाघेर बसेका निस्कृय कर्जाको सावा ब्याज चुक्ता गरेमा बैंकले त्यसको ब्याजमा १० देखि ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, । सीइओ उपाध्यायले बताए ‘अहिलेलाई यो प्याकेज असार मसान्तसम्मका लागि ल्याइएको छ ।’ पछि समय थप पनि हुन सक्छ । अहिलेको प्रभाव हेरेर समय थप गर्न सकिने उनीले दाबी गरे ।
बैंकले ‘समस्याग्रस्त कर्जा असुली तथा गैर बैकिङ सम्पत्ति राफसाफ गर्ने निर्देशिका, २०७७ जारी गरेर साना ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्ने अवसर दिएको हो । जेठ ३१ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले उक्त निर्देशिका पारित गरेकोे र असार १ गतेदेखि निर्देशिका लागू भएको हो । बैंकले ल्याएको निर्देशिकामा कर्जाको रिक्स व्यवस्थापन पक्षलाई वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट रेटिङ गर्दा आउने स्कोरको आधारमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको सीइओ उपाध्यक्षले बताए ।
बैंकमा २ वर्षदेखि भाका नाघेका साना तथा लघुअन्तर्गतका अपलेखन तथा गैर बैकिङ कर्जामा १० देखि ६० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
यस्ता कर्जाको ब्याजमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट भने प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका बैकिङ कार्यालयले नै दिन सक्नेछन् । सो भन्दा माथिको ब्याज छु्ट पाउनका लागि भने कृषि विकास बैंकको मुख्य कार्यालयको कर्जा असुली समिति तथा आवश्यक परेमा सञ्चालक समितिले समेत छुट दिने निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ ।
कर्जाको भाका नाघेको समय, कर्जा लिँदा राखेको धितोको हालको मूल्यांकन, दैविक प्रकोपका आधार र ऋणीको आर्थिक (आम्दानीका अन्य स्रोत) अवस्थाको मूल्यांकन गरेर कर्जाको ब्याजमा छुट दिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागि विना धितोमा प्रदान गरिएको लघु कर्जामा पनि अधिकतम छुट दिएर राफसाफ गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको उल्लेख छ ।
कृषि विकास बैंकले १ हजार २ सय ५१ जनालाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको कर्जाबाट अझै ९ करोड ५४ लाख ६३ हजार असुल गर्न बाँकी छ । उक्त कर्जा सावा ब्याजसहित हो । त्यस्तै साना तथा लघु वित्तअन्तर्गत २४ करोड ७३ लाख कर्जा असुल हुन बाँकी छ । यी र यस्तै प्रकारका अन्य कर्जा असुल गर्न बैंकले पहिलो पटक यस्तो निर्देशिका नै जारी गरेर नयाँ स्किम ल्याएको हो । हाल कृषि विकास बैंकको कुल कर्जाको साढे दुई प्रतिशत निस्कृय कर्जा रहेको छ । सोमध्य ५० प्रतिशत असार महिना मै असुली गर्न बैंकको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । जय होस् ।